Ummati Afrikaa cunqurfamee fi itt roorrifame fi michuulee fi mararfatooti sagaleen saanii akka dhagahamutt baaqulaa ol kaasanii Presidant Obaamaan akka abbaa hirree fi mirga ilmoo namatt roorrisaa seerawaa gochuu irraa of qoqopbatu iyyaa jiru. Kun daawwii tasaa utuu hin tahin imaltu dursee karoorfame. Bulchoota godinaa keessaa nama nyaataakan tahee qanansiisa malbeekii kennuuf karaa haxaawuuf jechuun, daawwii Ittaantu Barreessituu Murnaasa Finnaatt dabalamee ambasadara michuu riphee lolaa bara hedduu muudamteett . Bulchooti Itophiyaa kanneen demokratoti Klinton “dhaloota demokratotaa haaraa” jedheen keessaa tokko turan. Hedduun amma karaa irraa maqaniiru. Jarri kunis daddaaqaa jiru. Daawwiin Presidant kun utuu isaan kan biraatt hin utaalin karaa irra isaan buusa taha. Godaansich godaansa demokraasii miti, kan “FEDHA SABAAWAATI”.
Demokraasiin fakmishoo ilmaan namaa hundi bira gahuuf hawwani. Hanga yoonaa abbala malee hojii irra ooluu saa hin agarree.Kun akeeka namoota akka Abraham Loncolniin dansatt “Mootummaa ummataa ummataaf ...” jedhamee furameera. Garuu gara caaluu shaakala utuu hin tahin akeeka tahee hafe. Kanaaf malee akka jedhamutt demokraasiin hangammeessa bulcha malbulchaa kan qabeen saa yoo xinnaate “ walqixxummaa, birmadummaa, qondaalota qajeeltoon kennatamanii fi bilisummaa haasaa fi of ifsuu” of keessaa qabu. Kanneen keessaa tokko hirdhannaan demokraasiin hin jiru. Akka bar tokko Ittaanaa Barreessaan Finnaa jedhett Amerikaan “DEMOKRAASIIN HIN JIRU, GAMTAAN HIN JIRU” kan jedhutt amana. Itophiyaatt qabee yartuu dhahaman keessaa hundatu hanqata. Garuu gamtaan arfacha jaarraaf hanqatee hin beeku. Waggoota tokko fi sadii tursuun hama hin tahu; yeroo dheeraa akkasiif biyyi addunyaa keessaa dagaagaan kun irbuu seene hin guutin hafuun malalchiisaa dha. Utuu moo’ummaan ummatootaa ulfeeffame dhimma keessa waliif humna fagoott iyyachuun barbaachisaa hin turre. Dhibdeen saanii godinaa keessatt furamuu dandaha ture. Garuu sun hawwa tahee hafus jara dhimmicha keessa seenan irraa qajeeltuu eeggachuun waan guddaa miti.
Sun kan fedhe haa tahu, gara itt roorrifamootaan demokraatoti addunyaa nuu birmatu taha jedhaanii eeggachuu qaata dhaabbachuutu irra ture. Garuu kan nama dhibu mormiin, gamtaan akka dhaabbatu karaa qubqabsiisii hawaasomaa fi dhiicha hiriiraan, barruulee kkf itt fufee jira. Hundi dhama’uu qofa; anga’oon addunyaa “fedha sabaawaan” jaamaniiru. Kanaaf hiyyeeyyii fi cunqurfamoon Afriikaa akka mirga ofiif lolatan of qofaatt dhiifamani.”Baraarama kan caalaa of dandahuu” dhugaan addunyaan Afriikaa irratt shaakalamaa jira. Afriikaanoti hanga yoonaa ofumaan as gahaniiruu; callisanii dhumuu irra jannumaan lafa, fedha fi ulfina saanii irraa faccisaa itt fufuu qabu. Anga’ooti addunyaa kan godhan hunda beekaa godhu, akka waan sirrii hojjetaa jiran of amansiisaniiru. Kumooti beela’uun, hidhaa keessatt samuun, biyyaa ari’amuu fi kumooti du’uu fi baduun firummaa kanneen qacefixa raawwatanii dhiisisuuf nafii hin guutani.
Waan nageenya ilaalutt gooltuu duukaa bu’ee adamsuuf ABUT “gartuu furtuu US”. Somaliyaa keessatt madaqfamtuun Empayera Itophiyaa heeduun duruu dhumanii gabasa malee hafanii. ABUT utu lafquwiin isa hin danga’in US kaffallaan ergamuuf qophee dha. Daawwich akka hariiroon kun itt fufu jajjabeessa taha. Waan gooltummaa ilaalutt ABUT akka fedhett homishee, kumoota ajjesee fi shoroorkeessee kanneen lakkofsa hin qabne hidha. Dhuguma shoroorkaa ABUTiin mormuun ummatooti ka’aniiru, caalaa ka’aas jiru. Kaka’a “gaaffii mirgaa, walqixummaa, birmadummaa fi nagaaf” godhamu, kaasaa saa fi itt baha saa Ameriika caalaan beeka kan jedhu hin jirre. Gooltummaan waan maljechi saa hin himamneef dilormaan empayeritt hundi gooltuu jedhamee unkuramaa jira. Utuu sana hin maljechisini kan amma hariiroo jabeessuuf walti qabaaman mari’atamuuf deemu. Ummatooti empayeritt keessattuu Oromoo fi jornaalistoota shororkeessuun itt fufufuuf deema jechuu dha.